नयाँ वर्षमा टेलिकमको अफरै अफर - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
चैत ३०, २०७४ 405 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
नेपाल टेलिकमले नयाँ वर्षको अवसरमा विभिन्न छुट तथा अफर उपलव्ध गराउने भएको छ । २०७५ बैशाख १ देखि १५ गतेसम्म लागु हुने गरी टेलिकमको सेवामा छुट तथा अफर दिएको हो ।
टेलिकमले उपलव्ध गराएका छुट तथा अफर यस्ता छन्ः–
जीएसएम/सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा अनलिमिटेड नाइट डाटा प्याक प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनलिमिटेड जीएसएम/सीडीएमए नाइट डाटा प्याक अन्तर्गत १५ रुपैयाँमा १ जीबी डाटा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छ । डाटा खरिद गरेको एक दिन सम्म यसको अवधि हुनेछ । १ जीबी डाटा थ्रिजी/फोरजीको गतिमा चल्ने छ र त्यसपछि २५६ केबीपीएसको गतिमा चल्ने छ ।
उपलब्ध गराएको प्याकेजहरु प्राप्त गर्नका लागि ग्राहकले आफ्नो मोबाइलबाट *1415# डायल गरि सेवा प्राप्त गर्न सक्ने टेलिकमले जनाएको छ ।